China Mmiri Halogen Nke Oké Bay China Manufacturers & Suppliers & Factory
Mmiri Halogen Nke Oké Bay - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Mmiri Halogen Nke Oké Bay)
200W High Bay Halogen na-agbanye ọkụ
The High Bay 200w Na bụ 26,000 lumens na 130lm / w. Nke a High Bay 200w bụ DOB na-enweghị onye ọkwọ ụgbọ ala. Elu Osimiri Halogen dị na 3000k, 4000k.5000k na 5700k. Ogologo ihe omumu anyi di elu 400w bu EC ROHS ETL DLC kwadoro. Oké mmiri a dị elu eji maka ebe a na-adọba ụgbọala, nhazi ihe oriri na ịkwadebe, barns...
Igwe onu ogugu ahia nke uzo ojoo uzo ojoo 30W
Ogwe Anyanwụ Anwụ nke 30w Street na- abịa na mgbawa dị elu-lumen leds, 30W nke ike LED, ultra-shine 3450Lm, 5000k, nnukwu arụmọrụ nke ìhè. Nke a Solar Street Light Light Price nwere ike uto gbanye n'abalị (ọnọdụ adịghị), gbanyụọ ụtụtụ wee bido ịgba ụgwọ. The Commercial Solar Dugara Street Ìhè t on on na-egbuke...
Sistem Mbara Igwe Anwụrụ ọkụ Kachasị Anyanwụ nke 30W
Igwe ọkụ anyị nke 30w 12v Led Street na- abịa na mgbawa dị elu-lumen leds, 30W nke ike LED, ultra-shine 3450Lm, 5000k, nnukwu arụmọrụ nke ìhè. Nke a Solar System Street Light price nwere ike uto gbanye n'abalị (ọnọdụ adịghị), gbanyụọ n'ụtụtụ wee malite ịgba ụgwọ. The Best Solar Dugara Street Light t on on...
Igwe ọkụ ọkụ dị elu nke ìhè 800w 130lm / w
Nsonaazụ a dị elu nke nnukwu ọkụ ọkụ 800w 130lm / w nwere ọnụọgụ nke 65,000lumens. Nnukwu ike 800w 130lm / w LED spotlight dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ. Nnukwu nnukwu 800W 130lm / wpower ikanam ya dị...
Igwe ọkụ ọkụ dị elu nke ìhè 600w 130lm / w
Nsonaazụ a dị elu Pụrụ Iche ọkụ ọkụ 600w 130lm / w nwere ọnụọgụ nke 65,000lumens. Nnukwu ike 600w 130lm / w LED spotlight dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ. Nnukwu ọkụ ọkụ a nwere nnukwu LED 600 600 130mm...
ọnụahịa asọmpi nke ọkụ ọkụ 100W ufo highbay
ọnụahịa asọmpi nke ọkụ ọkụ 100W ufo highbay 1. 100W butere nnukwu mmiri A na-eji ya eme ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, ama egwuregwu Indoor, ụlọ mmepụta ihe, ụlọ ebe a na-edebe ihe, ụlọ ahịa 2. 100W ufo dị elu na-enwu ọkụ IP65 na-egbochi mmiri maka iji ya, mmiri na uzuzu na-eguzogide. 3. ufo led high bay bụ...
ufo butere elu mmiri ọkụ 150W nwere ihe mmetụta
1. ufo ada elu mmiri A na-eji ya eme ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, ama egwuregwu Indoor, ụlọ mmepụta ihe, ụlọ ebe a na-edebe ihe, ụlọ ahịa Mpempe mmiri 2.IP65 maka iji mpụga, mmiri na ájá na-eguzogide. 3. elu n'ọnụ ada ìhè bụ ọhụrụ mara imewe. Obere na olu dị ntakịrị, na-adigide ogologo ma kwụsie ike. 4....
Ihe omumu ihe omumu nke 150W LED High Bay Light
Ihe omumu ihe omumu nke 150W LED High Bay Light 1. 150W UFO butere ọkụ dị ukwuu na-eji n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, ama egwuregwu ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ebe a na-edebe ihe, nnukwu ụlọ ahịa Mpempe mmiri 2.IP65 maka iji mpụga, mmiri na ájá na-eguzogide. 3. 150W ụgbọ elu elu ìhè bụ ọkaibe ọhụụ. Obere na olu dị ntakịrị,...
5000K 150 Watt UFO High Bay Lighting 1. 150W UFO ulo oru highbay na-eji na ulo oru, ụlọ nkwakọba ihe, Indoor ámá, ụlọ mmepụta ihe, ụlọ nkwakọba ihe, supermarkets Mpempe mmiri 2.IP65 maka iji mpụga, mmiri na ájá na-eguzogide. 3. 150W ụgbọ elu elu ìhè bụ ọkaibe ọhụụ. Obere na olu dị ntakịrị, na-adigide ogologo ma kwụsie...
100W High Bay UFO Lights 100-277VAC 1. Ulo ulo nchekwa UFO Light eji otutu ulo oru , ulo ahia, ulo n'ime, ulo oru, ulo ahia, ulo ahia Mpempe mmiri 2.IP65 maka iji mpụga, mmiri na ájá na-eguzogide. 3. UFO duuru ìhè ulo oru bụ ọkaibe ọhụụ. Obere na olu dị ntakịrị, na-adigide ogologo ma kwụsie ike. 4. Commercial High...
Mmiri Halogen Nke Oké Bay Mmiri Halogen nke Oké Bay Mmiri Na-eme Mberede Oké Osimiri Bay Owu Mmiri nke Elu Bay Mmiri Oké Osimiri Bay Mmiri Ufo nnukwu Bay Mmiri nke kachasị mma Ejiri Ngwunye Elu Bay